Psychology and Relationships Yazi wena
Sonke ukususela ebuntwaneni silungiselela ukuba xa sikhula, siya kuba neentsapho, indlu - indebe epheleleyo, abahlakaniphileyo, abantwana abathobelayo kunye nomoya wokuzonwabisa olungenammiselo. Kodwa ngokuqhelekileyo kwenzeka ukuba ixesha lihamba, intombazana ikhula, kwaye ... akukho nto iyenzekayo. Kwaye njengomfanekiso, uhlobo aluzange lukhubekise, kwaye ubuso bubumnandi, kodwa akukho nobomi bodwa kwaye yiloo nto. Yaye nangona abanye beshada ngokuphumelelayo, abanye bayazibuza ngokuzibuza: "Kutheni ndihlala ndedwa?". Kwaye kutheni? Masifike kumzantsi wale ngxaki.
Kutheni umntu eziva enesizungu?
Ngethuba lethu elikrakra kunye nokukhawuleza, ulunwabo alusamangalisi mntu. Ukusebenza kwiidolophu ezinkulu kudinga umsebenzi omkhulu ngokomzimba nangokwengqondo, kwaye nexesha libulala kakhulu. Iklasi yeklasi apho, emva komsebenzi wosuku olunzima, umntu ubuyela kwindlu yokuhlala engenanto, apho kungekho mntu umlindele khona. Kwaye ixesha kunye namandla okufumana ulwalamano okanye ukuhlangana kunye nabahlobo besininzi kuphela ngeveki.
Esi sizathu sezizathu zokuthi kungani amantombazana enesizungu. Oku kubonakala ngakumbi kwiidolophu ezinkulu. Ngethuba lusuku lwesitalato, kukho abahlobo, abahlobo, ukuhamba kwezothutho, ubunyulu abubonakali. Kodwa kungekudala kusihlwa, kwaye abantu bahlakazeka emakhaya abo, kukho ukuziva kungekho nto kwaye akukho nto. Ngesizathu esifanayo, ii-nightclub zidalwe apho umntu angakwazi ukukhupha le ntliziyo. Nangona kunjalo, i-intanethi kunye nomnxeba ziyaziwayo ngoku, apho abantu bazama ukubalekela le ntlungu ecinezelayo. Abaninzi beengqondo baye baqaphela ukuba unxibelelwano olungqalileyo luncedo lokuthintela ukuxinezeleka kunye nokuphazamiseka kwemiba. Emva kwakho konke, ngokohlobo lwalo, ubunyulu alunanto ngaphandle kokungabikho kolwazi kunye nokukwazi ukutshintshisana nokwabelana ngako.
Nangona kunjalo, nangona uluhlu oluninzi lwabafowunelwa, amaninzi amantombazana ayaqhubeka ebuza: "Kutheni ndiziva ndedwa?" Kwaye izizathu apha zixhomekeke kunzulu kunxibelelwano lwabantu.
Kutheni abafazi banesizungu?
Abesifazane abancinci nabanomdla - le yimeko yeklasi, enokufumaneka namhlanje. Yaye bona abayekanga ukulwa. Akunakukwazi ukuhlangabezana nomviwa omnye. Ukukhangela abantu abaqhelana nabo, amantombazana namabhinqa anamhlanje asebenzisa iiwebhusayithi ezizodwa, cela abahlobo ukuba bazise okanye baququze intlanganiso, batyelele indawo apho kunethuba lokuhlangana nomntu omtsha. Kodwa, ngokomthetho, oku kunokwenzeka kuphela kwiimeko ezizimeleyo. Ngoko kutheni namantombazana amahle enesizungu? Le ngongoma apha ayibonakali, kodwa kwicandelo langaphakathi.
Njengoko sele sifumene, ukulondeka kukungabikho kokubonwa kunye nokunxibelelana. Ukuba ufuna ukuze uzibuze yona umbuzo: "Kutheni ndiyedwa?", Zama ukuziqonda kwaye uqonde uhlobo oluthile lwezibonakalo kunye neentlungu ozilahlekileyo. Okanye mhlawumbi uhluthise iimfuno zakho kunye nabanye? Masithi abaninzi abanakuqonda kwaye bahlala bebuza amadoda ukuba kutheni amantombazana amnandi ayedwa. Kwaye abantu abangaqhelekanga nabahlobo bokuqala bayazi ukuba zilungile? Ngenxa yoko, akukho konke okulungileyo, ukuba awukwazi ukufumana umlingane womphefumlo. Kwaye kufuneka ufune ukuzigweba. Okokuqala, ukuze kupheliswe le ngxaki kubalulekile ukuziqonda. Ngoko, makhe sijonge ngezizathu zokuba amantombazana ayedwa kwaye azama ukulungisa:
Uzibona njani wena. Ukuba uhanjelwe ngcamango yokuba awuyena ohlakaniphile, kungeyona nto enhle, engaphumeleli kwaye engafanelekanga uthando, oku akungathandabuzekiyo kukuchaphazela izimvo zabanye ngawe. Musa ukuzibandakanya kwi-flagellation. Ukukuthanda, okokuqala, thanda uze uqiniseke.
Musa ukulinda. Impazamo eqhelekileyo yintombazana engatshatanga kukuba kukuba bahleli ekhaya kwaye banqamle isangqa soqhagamshelwano balindele ukuba le nto iya kubanika yona. Ngokuqhelekileyo iya kubantu, yenza iziqhelana ezintsha kwaye uholele ubomi obusebenzayo. Ngaloo ndlela uza kukwazi ukubona nokuxabisa.
Esinye isizathu esivakalayo sokuba kutheni abaninzi abantu abangabesifazane abangabhinqileyo kwihlabathi baziva bengathembeki kwindoda yesini. Amantombazana amaninzi athambekele ekugxeka abantu, ngenxa yokuba ubomi babo abuquki. Kukholelwa ngokubanzi ukuba bonke abantu bafana, bengenakufanelwa uthando kwaye ngokuqinisekileyo baya kumngcatsha, bayeke, njl. Akumangalisi ukuba ngale ngcamango ebusweni, akukho nto eyenzekayo. Ukubanda ngokugqithiseleyo nokunyaniseka kungaphazamisa umntu onokuvuya naye. Ukuba ufumana kuphela loo madoda angakufanelanga, cinga ngesimo sakho sengqondo kwindoda yesini ngokubanzi.
Ukuxabisa nokuhlonela inkululeko. Ukuba ulwalamano lwakho nendoda luhlala lukhula nje, khumbula ukuba ngaphezu kobuqu bomntu, umntu ngamnye unomdla kunye nezinto ezithandwayo. Ukuhlambalaza, ukungabi nomona kunye namabango akuthembisi nto into enhle. Musa ukufunwa kumntu ohlala engqalelo kuwe, kwaye uya kukuhlawulela inzala enkulu.
Khangela igolide ithetha. Musa ukuxosha amadoda amaninzi. Khetha omnye kuphela onokuqalisa ulwalamano naye. Kule meko, ungathethi kakhulu malunga nokuhluleka kwakho okudlulileyo kwintando, kwaye nangakumbi ukuba amehlo avelise iimvakalelo kwixesha lazo zangaphambili.
Hlala wena. Amantombazana amaninzi azama ukubonakala njengamantombazana abo aphumelele kwaye ahamba phambili. Olu xelisa, naye, aluyi kubakho kwisiphumo esihle. Yazisa oko unakho kwaye ukhumbule ukuba baya kukuthanda ngenxa yakho.
Ukuba ukhathele ukubuza "Kutheni ndiye ndedwa?", Njalo ukhangele impendulo kuwe. Musa ukugxeka abanye ngeengxaki zabo. Cinga kwakhona isimo sakho sengqondo ebomini. Kukho ilizwi elihle-xa umntu eyeka ukukhangela, ukuphela kwayo ngokwayo kunika oko akufunayo. Ngoko ungaxhonywanga kwedwa. Jabulela ubomi, jongeni ngokuqinisekileyo kuyo yonke imbonakalo yayo, kwaye ngokuqinisekileyo iya kuninika into ophuphayo.
Indlela yokulahla umlutha wothando?
Ukukhathazeka kweengxaki zokungabi nakhubazeka kwabantwana kunye nabadala
Iimpawu zokudakumba kwabasetyhini
Indlela yokulinganisa umgangatho waMacavellian (MAK-SCALE)
Umculo okhuthaza ubuchopho
Ubume buntu - izigaba kunye neentlobo
Umsebenzi ophezulu wesantya
Iindaba - iintlobo kunye neemfihlelo zokumkelwa kwamakethi
Ungaqala njani ukuphila?
"Isifo seBlue" okanye kutheni abantu benza iittoti?
Isobho seMushroom kwi-multivarque - iindlela zokulula ezilula zokufunda
IRiphabhliki yaseDominican, iPunta Cana
Amadlelo aseSt. Petersburg
Inkukhu e diweyo
Yintoni ongayibonisa ngayo unyana wakhe ngoFebruwari 23 - iingcamango ezintle kakhulu kunye neenketho
Iimodeli ezisezantsi ze-2015-2016
I-Orlando Bloom kunye noNina Dobrev babonwa ndawonye kwi-premiere yefilimu ethi "thembisa"
Kutheni iikati zilala ezinyaweni?
Izambatho zezorhwebo kubafazi
Lasagna i mifuno - zokupheka okumnandi zesitya esidumile saseNtaliyane
Amazwe angamaHlathi kumaZiko aseUkraine
Intsimi yintsimi yintyatyambo - elula kwaye enomdla
UKim Kardashian uxelele ngomama onyanzelekileyo kwaye wabhala isicatshulwa kwesi sihloko
Iingqungquthela zabaseTyhini - i-gizmos yobugcisa ukudala isaphetha esinefestile